Ny tetik'asa karbonina manga dia afaka manampy ny governemanta hanatratra ny tanjon'ny fanalefahana sy fampifanarahana nasionaly mba hahatratrarana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra sy maharitra. Izy ireo dia afaka manohana ny ezaka nasionaly amin'ny fikajiana ny serivisy amin'ny tontolo iainana amin'ny morontsiraka, ka manome tosika fanampiny ho an'ny fitantanana ny tontolo iainana. Izy ireo dia afaka manome famatsiam-bola fanampiny hanohanana ireo paikady fitantanana tontolo iainana efa misy. Ohatra, ny offsetting ny karbaona dia azo ampiasaina hamoronana famatsiam-bola ho an'ny fiarovana amin'ny alàlan'ny famelana ny entity hividy ny fahafahany manonitra ny fandotoan'ny karbôna ho takalon'ny tsy famoahana ny karbaona any an-kafa - ka ny ecosystem karbonika manga dia tazonina, naverina averina, na azo atao tsara. ary hampitombo ny tahiry karbonany. Jereo ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoohatra amin'ny tetikasa iray eto Madagasikaramanokatra fisie PDF mba hanohanana ny fiveloman'ny fiaraha-monina sy ny fihenan'ny karbaona.